किशाेरी बलात्कार र हत्या प्रकरणः सरकारले दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने
सरकारले देशैभरी हुने जुनसुकै खालका आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गरेरै छाड्ने बताएको छ । शुक्रबार राति बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकार आपराधिक क्रियाकलापप्रति गम्भीर रहेको बताए । उनले भने, 'सरकार दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ।'
सांसदहरूको मागः ‘बलात्कारीलाई आजीवन जेल सजाय’
प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरू महिला हिंसा र बलात्कार घटनाका पीडकलाई आजीवन जेल सजाय हुने कानुन ल्याउन एकमत देखिएका छन् ।
बिमस्टेक सम्मेलनमा को को आउँछन् ? के गर्छन् ?
बहुपक्षिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना बाजेद, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, श्रीलंकाका राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रायुत व चा, म्यानमारका राष्ट्रपति विन मिन्ट, भुटानका अन्तरिम मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष छिरिङ तोग्वे सहभागी हुने निधो भइसकेको छ ।
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरीलाई न्याय माग गर्दै भएका ट्विट शुक्रबार ट्वीटरमा ट्रेन्डिङ भयो । जस्टिसफरनिर्मला ह्यासट्यागमा शुक्रबार दिनभर करिब २७ हजार ट्वीट भए ।
विदेश जान लागेका तत्कालीन माओवादीका पूर्वबाल सैनिक लेनिन विष्टलाई सरकारले विमानस्थलबाट फिर्ता गरेको छ । माओवादी लडाकुको प्रमाणीकरणका क्रममा कम उमेरका कारण बहिर्गमनमा परेका विष्टलाई गृह मन्त्रालयको आदेशमा अध्यागमनले शुक्रबार बिहान विमानस्थलबाट फिर्ता गरेको हो ।
पर्यटकको फर्जी उद्धारः 'ट्राभलर एसिस्ट'सँग सरकारले माग्यो प्रमाण
नेपाल आउने अमेरिकी, बेलायती र अस्ट्रेलियन पर्यटकको भ्रमणबिमा गराउँदै आएको दाबी गर्ने ‘ट्राभलर एसिस्ट’ सँग पर्यटन मन्त्रालयले फर्जी उद्धारमा संलग्न हेलिकप्टर कम्पनी, अस्पताल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीका प्रमाण मागेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले शुक्रबार पनि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ । जिल्लामा केही दिनदेखि जारी आन्दोलन उग्र बनेपछि स्थानीय प्रशासनले शुक्रबार राति ८ बजेदेखि अर्को सूचना जारी नभएसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरिएको हो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) का रजिस्ट्रार प्राध्यापक भोला थापाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । विश्वविद्यालयअन्तर्गत स्कुल अफ लका डिन तथा संविधानविद् विपिन अधिकारीलाई प्राध्यापक बनाउने विषयमा विवाद बढेपछि थापाले राजीनामा गरेका हुन् ।
भवानी भट्ट, चित्रांग थापा
किशोरीको बलात्कारपछि हत्या घटनामा प्रहरी अनुसन्धानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयमाथि प्रहरीले गोली चलाउँदा शुक्रबार महेन्द्रनगरमा एक जनाको मृत्यु भएको छ । महेन्द्रनगर, भगतपुरका १४ वर्षीय सन्नी खुनाको मृत्यु भएको हो ।
संसद बैठकः महिला हिंसाविरुद्धको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले महिला हिंसा विरुद्धको सङ्कल्प प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
आगामी १४ र १५ हुने बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनभर सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा जोर र बिजोर नम्बर प्लेटका आधारमा सवारीसाधन चलाउन दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार गृहमन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मकवानपुरको एउटा गाउँ, जहाँ कुखुरा नै पालिन्न
हिमाल, पहाड होस् वा तराई, अधिकांशले कुखुरा पाल्ने गर्छन् । थोरैले व्यावसायिक र धेरैले परम्परागत ढंगले कुखुरा पालिरहेकै छन् । तर मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा यस्ता गाउँ छन् जहाँ कुखुरा पाल्ने त कुरै छाडौं, छुन पनि छुँदैनन् । मासु र अन्डा पनि खाँदैनन् । कुखुराको साटो ती गाउँका मानिस हाँस पाल्छन् । थाहा नगरपालिका वडा १ र १० का कुन्छाल गाउँ, नुलगाउँ र टौखेलमा प्राय: ले हाँस पालेकै हुन्छन् ।
पूर्व लडाकु बिष्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइयो
पूर्व माओवादी लडाकु लेनिन बिष्टलाई बैंककमा हुन लागेका एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जानबाट रोकिएको छ । उनी बाल सैन्यविरुद्धको अभियानमा सक्रिय छन् ।
आगामी १४ र १५ हुने बहुपक्षिय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीकाको प्रयास (बिमस्टेक) सम्मेलनको अवसरमा भारत र नेपालबीच छुट्टै दुई सम्झौता हुने भएका छन् ।परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञावलीका अनुसार रक्सौल–काठमाडौं रेल्वे र बल्क कार्गो सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको हो ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२ उल्टाखामकी १३ वर्षीया किशोरीको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाको प्रहरी अनुसन्धानप्रति स्थानीयले अविश्वास जनाउँदै चर्किको आन्दोलन पछि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समेत महेन्द्रनगर पुगेको छ ।
बलात्कार विरुद्ध चितवनमा प्रदर्शन
देशभर बढ्दोक्रमा देखिएको बलात्कार जस्ता यौन हिंसाका विरुद्ध शुक्रबार महिला अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय संघ संस्थाले भरतपुरमा प्रदर्शन गरेका छन् । महानगरपालिकाको कार्यालयबाट र्‍यालीसहित जिल्ला प्रशासन पुगेर उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कञ्चनपुर घटनामा परेर घाइते भएका आन्दोलनकारीको स्वास्थ्योपचार सरकारले गर्ने बताएका छन्।
१३ वर्षीया किशोरीको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धानप्रति अविश्वास जनाउँदै महेन्द्रनगरमा चर्किएको आन्दोलन शुक्रबार केही कम भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्न संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । सदनमा सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न २२ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी असार २१ गते संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास(बिमस्टेक)को आसन्न शिखर बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौं आउनेमध्ये म्यानमार र श्रीलंकाका राष्ट्रपति लुम्बिनी भ्रमणमा जाने भएका छन् ।
रातभरको अविरल वर्षापछि गएको पहिरोले पृथ्वी राजमार्ग पूर्ण रुपमा अवरुद्ध भएको छ । थाक्रे गाउँपालिका-३ को भुमेस्थान र ५ को जुङेखोलामा गएको पहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो ।
हिमाली जिल्ला मनाङ जाने बेंसीसहर–चामे सडकको च्याम्चे र घट्टेखोलाबीच बुङ छहरा नजिकै सडक भासिएपछि अवरुद्ध भएको छ । गए रातिको भीषण वर्षाले मर्स्याङ्दीको बहाव बढेसँगै त्यसले मुनीबाट जमिन कटान गरेपछि सडक भासिनुका साथै पहिरो समेत गएको स्थानीयले बताएका छन् ।
वीरेन्द्रनगर–६, बुद्धपथकी सुशीला थापाले असोज पहिलो साता छोरी प्रतिज्ञालाई जन्म दिइन् । परिवारले जन्म दर्ता गरिदिएको सातामै नगरपालिकाले प्रतिज्ञाको नाममा बैंक खाता खोलिदियो ।
स्थानीय तहमा सिफारिस र प्रमाणितजस्ता कागजपत्र अंग्रेजी भाषामा उल्था गर्ने जनशक्ति नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती पाएका छन् । यत्ति कामका लागि उनीहरू सदरमुकाम धाउन बाध्य छन् ।
ऐन संशोधन नहुँदा अपांगता भएका थुप्रै व्यक्ति परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित छन् । परिचयपत्र हुनेले पनि तोकिएको सेवा सुविधा पाएका छैनन् । सरकारले ‘अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४’ ल्याएको थियो ।
गोपनीयतासम्बन्धी विधेयक : बन्द समाजतर्फ धकेलिने संशय
०४६ सालयता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पदमा बहाल भएपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले संसद्मा पेस गरेको वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हुबहु पारित भए मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न रोक लाग्नेछ ।
मलेसियामा सहज रूपमा नेपाली कामदार पठाउन दुई मुलुकबीच श्रमसम्झौता हुने भएको छ । सम्झौतापछि तीन महिनादेखि रोकिएको मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया खुल्नेछ । अब मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रियामा बिचौलिया कम्पनी र एजेन्टहरूले प्रवेश गर्न पाउनेछैनन् ।
सरकारी अनुगमन टोलीलाई गत सोमबार कालीमाटी तरकारी बजार अनुगमन गर्दा व्यवसायीले नियन्त्रणमा लिए । अनुगमनको विरोधमा व्यवसायीले भोलिपल्ट तरकारी बिक्री ठप्प पारे । व्यवसायीले अनुगमन टोलीमाथि गरेको यो दुर्व्यवहार पहिलो घटना हैन ।